Griezmann; “Waxaan taageeraa oo aan ku daysadaa David Beckham waana taas sababta aan u xirto funaanadda gacma dheeraha ah” – Gool FM
Griezmann; “Waxaan taageeraa oo aan ku daysadaa David Beckham waana taas sababta aan u xirto funaanadda gacma dheeraha ah”
(Madrid), 26 Sebt, 2016 –Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday in xidigga uu aadka u taageero isla markaana uu ku daysado qaab ciyaareedkiisa uu yahay Laacibkii hore ee Ingiriiska David Beckham.
Dhaliyihii ugu goolasha badnaa Euro 2016 (6 gool), Griezmann oo 25 jir ah ayaa xusay in xitaa uu Beckham awgiis u xirto funaanadda gacma dheeraha ah kolka uu ciyaarayo.
“Waxaan u xirtaa Funaanadda gacma dheeraha ah Beckham dartiis, taasoo isagu uu sameyn jiray, waana xidigga aan ku daysado” ayuu Griezmann u sheegay ‘Onda Cero’.
“Waxaa uu ahaa xiddig dhameystiran marka uu garoonka ku jiro, waana middaas tan aan aadka uga jeclaaday, ma jirto ciyaaryahan leh lugtii midig ee Beckham oo kale, weli lama hadal David balse waan jeclaan lahaa in aan mar la hadlo” ayuu sii raaciyay Xidigga Faransiiska.
Griezmann waxa uu xusay in uu daawan jiray Beckham xilligii uu u ciyaarayay Manchester United, isagoo jaceylka uu u qabo xidiggii hore awgeedna u doortay funaanadda uu haatan ku ciyaaro ee lambarka 7′.
Griezmann : Siempre juego con manga larga , como jugaba mi ídolo “Beckham” pic.twitter.com/vEVENXcGG1
— Real Madrid 🇦🇷 (@RMadridi7mo) September 26, 2016
Podolski oo ugu baaqay Schweinsteiger inuu ka ciyaaro Horyaalka Mareykanka
Kooxda Rajo oo dhib la’aan uga badisay dhigeeda Savaana